စတော်ဘယ်ရီ Mousse Trifles - ချက်ပြုတ်နည်းများ
လေထု fryer အတွက်ကြက်ဆင်ဘာဂါ
ခရမ်းချဉ်သီးကြက်သွန်နီနှင့်ငရုတ်ကောင်းနှင့်အတူ swiss ကင်
စတော်ဘယ်ရီ Mousse Trifles
ဤရွေ့ကား စတော်ဘယ်ရီмус အသေးအဖွဲကိစ္စများသည်အနီရောင်သစ်သီးများ၊ ပေါင်မုန့်ပြား၊
ဒါဟာငါတော်တော်များများသူတို့ကိုငါအားလုံးစားရန်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်မဆိုဆင်ခြေရှာဖွေနေတာကိုဆိုလိုတာကဒီမှာမိန်းအတွက်စတော်ဘယ်ရီရာသီပဲ! ထိုအခါဆင်ခြေအားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောပျော်စရာချက်ပြုတ်နည်းများကိုဆိုလိုတာ! ကျွန်တော့်အတွက်စတော်ဘယ်ရီဟာနွေရာသီအစာဖြစ်လို့သူတို့ရဲ့အရသာနှင့်ချိုမြိန်တဲ့ဖျော်ရည်တွေဟာအရာရာတိုင်းကိုလှလှပပချောချောမွေ့မွေ့းစေသည်။ အချိုပွဲများ၊ နံနက်စာ၊ သုပ်များ၊<— Seriously, try it out!
နွေရာသီကတည်းကအဘယ်သူမျှမုန့်ဖုတ်ဖို့အဲဒီမီးဖိုကိုဖွင့်ခံရဖို့လိုသည်, ဤအဘယ်သူမျှမမုန့်ဖုတ်စာရွက်နွေရာသီအခါသမယများအတွက်အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်နှင့်ကလေးနှင့်သတို့သမီးရေချိုးခန်းထဲမှာရေပန်းအဘို့အတစ်နှစ်ပတ်လုံးစုံလင်သည်။ သင်တို့သည်ဤအသေးစိတျကိုတစ် ဦး ချင်းစီခွက်၌ဖြစ်စေကြီးမားသော trifle ပန်းကန်၌ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်, နှစ် ဦး စလုံးပါတီတစ်ခုအဘို့အကြီးမြတ်ရွေးချယ်စရာများမှာ!
ဤရွေ့ကားအသေးအဖွဲပါဝင်ပစ္စည်းများရုံလက်တဆုပ်စာနှင့်အတူလုပ်သူတို့အတူတူပစ်ရန်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်လွယ်ကူပါတယ်! တစ်ပေါင်မုန့်ပြားကိုထုလိုက်သည်၊ စတော်ဘယ်ရီကိုခုတ်ထဲ့ကာလေးလံသောမုန့်ကို pudding mix နှင့် confectioners 'သကြားနှင့်အတူတက်သည်။ ပေါင်မုန့်ဟာစာရွက်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခြေခံအဖြစ်အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ ငါရေခဲသေတ္တာအပိုင်းမှာတွေ့ရတဲ့ Sara Lee ပေါင်မုန့်တွေကိုသုံးရတာ။ ၁၀ မိနစ်လောက်ထိုင်ခိုင်းပြီးမင်းကိုအလွယ်တကူဖြတ်နိုင်တယ်။ အဆိုပါစတော်ဘယ်ရီအရသာတစ်အရည်ရွှမ်းပေါ့ပ် add နှင့်စတော်ဘယ်ရီကြာပွတ်မုန့်ပန်းကန်မှပျော်စရာချိုမြိန်မှတ်စုဖြည့်စွက်!
စုဝေးဖို့, သင်အမှန်တကယ်ရုံပန်းကန်သို့မဟုတ်ဟင်းလျာများသို့အားလုံးအလွှာ။ ဒီချက်နည်းကသေးငယ်တဲ့ဟင်းပွဲကြီးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်သေးငယ်တဲ့ဟင်းပွဲတစ်ဒါဇင်လောက်ကိုဖြည့်ပေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့်မင်းခွက်ရဲ့အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။ သငျသညျကိုလည်းသေးငယ်တဲ့အသေးအဖွဲအဘို့နှင့်သေးငယ်တဲ့အသီးအသီးအဘို့အသေးငယ်အဘို့သင့် Cube ပိုကြီးဖြတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်သတိပြုသင့်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်ချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ စုစုပေါင်းအချိန်ဆယ့်ငါး မိနစ်များ ဝန်ဆောင်မှု၁၂ စားသုံးခြင်း စာရေးသူရေဗက္ကာအိပ်ချ်ဤရွေ့ကားစတော်ဘယ်ရီ Mousse Trifles အနီရောင်သီး, ပေါင်ကိတ်မုန့်, ​​စတော်ဘယ်ရီ mousse နှင့်ဖြန်းနှင့်အတူစိမ်းဖြင့်အဘယ်သူမျှမမုန့်ညက်အားရစရာပျော်စရာပါ! ပုံနှိပ်ပါ ပင်
▢1/2 ခွက် confectioners သကြား
▢1/3 ခွက် စတော်ဘယ်ရီ & Creme Jello-O pudding ရောနှော ခြောက်သွေ့
▢၁ ၁၆ အောင်စ အေးခဲပေါင်ကိတ်မုန့် နွေးထွေးစွာဖြတ်
▢နှစ် Quarts စတော်ဘယ်ရီ အရက်
ပါးလွှာသောတွဲဖက်မှုရှိသောတပ်ဆင်ထားသည့်ရောနှောသည့်အရာ၌မီးနှင့်ပြင်းထန်သောမုန့်များ၊ မုန့်လေးများ၊ သကြားလုံးများ၊ ပန်းကန်လုံးကြီးနှင့်လက်ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ကြာရှည်ခံသောမုန့်ကိုထုတ်လွှတ်နိုင်မည်မဟုတ်သကဲ့သို့သင်သည်နှစ်ဆဖြစ်စေနိုင်သည်။
ပေါင်မုန့်ကို Cube အလွှာဖြင့်စတော်ဘယ်ရီအလွှာဖြင့်စတော်ဘယ်ရီ mussse အလွှာဖြင့်စုဆောင်းပါ။
အလွှာများနှင့်ထိပ်ဆုံးကိုကြာရှည်ခံသောမုန့်၊ စတော်ဘယ်ရီနှင့် ထပ်မံ၍ ဆန္ဒရှိလျှင်ဖြန်းပါ။
သင်တန်းအချိုပွဲ ချက်ပြုတ်ခဲ့သည်အမေရိကန်© SpendWithPennies.com ပါဝင်သည့်အကြောင်းအရာများနှင့်ဓာတ်ပုံများသည်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ကာကွယ်ထားသည်။ ဤစာရွက်ကိုမျှဝေခြင်းကိုအားပေးပြီးတန်ဖိုးထားသည်။ မည်သည့်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုမဆိုကော်ပီကူးယူခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ကူးယူခြင်းများကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဓာတ်ပုံအသုံးပြုမှုမူဝါဒကိုဒီမှာကြည့်ပါ ။